8 seater seaside house Patio Garden rattan corner sofa, Furniture from China on TopChinaSupplier.com
Mbido ulo ngwaahịa Sofaslọ Mpụga 8 oche oche osimiri osimiri Patio Garden rattan akuku sofa
8 oche oche osimiri osimiri Patio Garden rattan akuku sofa
1 È US $ 637.46 / Set
High quality PE rattan wicker and a sturdy lightweight aluminum fRama
All mkpesa ahụ n'ime 1-3 ụbọchị.
Anyị nwere usoro ị ga-eji rụọ ọrụ maka mkpesa ndị ahịa.
Anyị ga-edozi ya dịka o kwere mee mgbe anyị nwetara foto, nsogbu description, usoro nọmba maka ihe na iji ọnụ ọgụgụ maka mkpesa.
Na anyị nkwa obere ụbọchị akwụkwọ ikike, akụkụ ahụ mapụtara free, anyị ga-akwụ gị akụkụ na-eri ma ọ bụrụ na mkpesa item si anyị obere akwụkwọ ikike ụbọchị.
1. Ma adabara ime ụlọ & n'èzí.
2. Igwe ọkụ UV dị mma, oke ọkụ na-eguzogide ọgwụ, na-eguzogide ihu igwe, na-enweghị ụcha.
3. Na mmiri na-eji mmiri dị jụụ dị jụụ maka nhọrọ.
4. Agba fom & Ohiri isi na-amasị gị.
5. Ngwa ahia eji eme enyi nke ọma site na ọnụahịa kacha asọmpi.
6. Ngwaahịa niile na-enye nkwa dịkarịa ala afọ 2.
7. OEM ma ọ bụ ODM dị.
TANFLY Furniture Co., Ltd bụ onye nrụpụta kachasị elu na onye na-ere ahia nke nwere ihe karịrị 7 afọ ahụmahụ ,.Companylọ ọrụ ahụ achịkọtala otu talent ma na R&D,
n'ichepụta na ahia nke sofa, sofa modular, nri iri, oche na
okpokoro, Ebe a na-asa mmanya, ezumike, oche a na-ekpo ọkụ, oche oche, nche anwụ n'èzí ngwaahịa.
EGO arara onwe ya nye n'inye "zuru okè Ihe Nleri Anya Solutions" ịg ụnsumers n'ụwa nile.
EGO nwere coenweghi obi iru alae onye zuru ụwa ọnụ kachasị mma site na:
Ø Mmeputa base: Acre: 7, 000 square mita, gụnyere: Nmeputa base,Rlọ Ọrụ R & D, Pleslọ ihe ngosi nlele Ø Core Production Ngwa: Aluminium tingcha Machine, ịgbado ọkụ Machine, Powder mkpuchi Machine, amfụfụ tingcha Machine, wingkwa Akwa Machine; Ø Production ikike: ikike mmepụta kwa afọ: Ngwongwo 300 * 40HQ. Ø Ọtụtụ n'ime akụrụngwa nke anyị na ngwaahịa a nwalere nditịm dị ka SGS. Biko jiri nlezianya chọta faịlụ faịlụ maka akwụkwọ asambodo anyị maka ule akụrụngwa a. Ø OEM: Anyị nwekwara obi ụtọ ịbụ ndị OEM soplaya abụọ nke na-eduga ihe eji achọ akwa ụlọ ọrụ n'ime ụwa (ọ bụghị coọ dị mfe iji kpughee aha ha, otu dị na US, otu dị na Australia). Ø Ebu Mmepe: Rlọ Ọrụ R & D bụ responsible niile ebu mmepe, anyị nwere ike izute ndị na-azụ anyị's ọhụrụ imewe image. Ø Lmimicsd akwụkwọ ikike: 24 ọnwa (gbakọrọ site na ụbọchị nrụpụta site na EGO) ihe niile ihe eji achọ mma. Ø Mkpesa: Anyị nwere usoro ị ga-eji rụọ ọrụ maka mkpesa ndị ahịa. Anyị ga-edozi ya dịka o kwere mee mgbe anyị nwetara foto, nsogbu description, nọmba usoro maka ihe na nọmba ọnụ ọgụgụ maka mkpesa. Na oge nkwa mmachi enyere aka, akụkụ gafee ọnụ, anyị ga-akwụ gị ụgwọ nha ma ọ bụrụ na ihe mkpesa ahụ apụtaghị ụbọchị ikike akwụkwọ ikike anyị.
Ngwongwo dị egwu Co. Ltd chọrọ iji weta consumers ọkwa dị elu nke ntụsara ahụ ma na-adọrọ mmasị ihe eji achọ akwa ahụmahụ site na yantinuous mma na aghụghọ. Ndị na-ere ahịa na-eji aha njirimara akpọrọ ihe ọnụ na nkwado ogologo oge na-anabatakarị maka mmekọrịta chiri anya, nke ga-eduga na ngalabantinuous ndozi na àgwà nke na-azụ ' ngwá ụlọ ndụ zuru ụwa ọnụ.
akuku sofa yana bed
sofa n'akụkụ sofa
osisi sofa etiti
akpụkpọ anụ akụkụ sofa
nkuku sofa na okpokoro